हर्ष र विस्मात दुवै बोकेर म काठमाण्डौबाट फर्किएँ,(केशु बिरही)
जीवनमा गरिने सवै खाले यात्राहरुलाई त्यति महत्वका साथमा नहेरिँदा रहेछन । यस्तै लाग्छ मलाई आजभोलि । यस्ता सवै घटनाहरु महत्वपूर्ण हुदैनन । महत्वहीन हुन्छन भन्ने मेरो आशय भने पक्कै होइन । सवै कुराहरुको महत्व आ -आफ्नै ठाउँमा हुन्छ । तर ती मध्ये केहीलाई हामी बढी महत्व दिन्छौ भने केहीलाई थोरै । मेरो आशय पनि यही हो । त्यसैले त्यस्ता बढी महत्व दिएका घटनाहरुलाई आफूसंगै राख्न हामी लालायित हुन्छौ । साहित्यिक वान्कीहरुमा भर्छौ । र पस्कन्छौ । ठीक आज म पनि केही महिना अघि मात्र भएको काडमाण्डौ यात्रालाई यहाँ तपाईहरु सामु पस्कने जमर्को गर्दैछु ।
लामो समयपछि मात्र म यसपटक काठमाण्डौमा केही दिन बस्नेगरी आउन भ्याएँ । स्पेसटाइम दैनिकको बन्द पछि म त्यति लामो समयसम्म वस्ने गरी काठमाण्डौ आउन भ्याएकै थिइन । जहिले पनि हत्तारोले नछोड्ने । कहिले जागीरको हत्तारो त कहिले समाज सेवाको । यस्तो हत्तारोले छाड्दै नछाड्ने । झन त्यसमा घरब्यवहारको हत्तारो पनि मिसिए पछि त कुरै छाडौ ।
आज आयो एक दिन वस्यो । भोली वा पर्सि त फर्किहाल्यो । बस्छु भनेर पनि बस्न नपाइने वाध्यता कस्तो लाग्छ काठमाण्डौसंग घनिष्ठता नहुनुमा यी वाध्यताहरुको पनि केही हात छ । अझ ठूलै हात छ भन्दा पनि फरक नपर्ला । मलाई त यस्तै लाग्छ । यही कारणले गर्दा मेरो काठमाण्डौसंग त्यति घनिष्ठता हुन सकेको हो । यसरी भन्दा पनि गलत नहोला । म आफै काठमाण्डौसंग घनिष्ठ बन्नै चाहिनछु क्यारे । अर्थात काठमाण्डौको धुलो धुँवा धुम्रपान र कोलाहलले मलाई कहिलै लोभ्याउन सकेन क्यारे ।
काठमाण्डौको धुलो पनि कति खाल खाल्को । महङ्गीको धुलो । राजनीतिको धुलो । अझ खुलेर भन्दा खोक्रो आडक्बरको धुलो । यो धुलो भने चुरोट तथा फ्याक्ट्रीहरुले फालेको धुलो वा धुँवा भन्दा पनि सयौ गुना हानिकारक हुँदो रहेछ । सुनेको छु शहरका मानिसहरु ज्यादै व्यस्त हुन्छन रे । एक छिन पनि समय नमिल्ने । गाउँबाट कोही आफन्त भेट्न आउँदा पनि उनीहरु भेट दिन सक्दैनन रे । अरु त के कुरा आफ्नै बाबु आउदा पनि भेट्ने समय हुन्न भने पछि अव के लाग्छ र । हुन सक्छ त्यो उनीहरुको वाध्यता हो । नत्र काठमाण्डौको महङ्गीको धुलोबाट कहाँ वच्न सकिन्छ र मुखमा माड पनि लगाउनै पर्यो । त्यसै मुखमा आएर नपस्ने । परिवार पनि धान्नै पर्यो । छोराछोरीलाई पढाउनै पर्यो । नभाको फुस्रो आडम्बर पनि देखाउनै पर्यो । वावा ! आडम्बर पनि कति हुन कति । अनि त्यो सहरको आडम्बरलाई धान्नलाई के ठेका नै लिए जस्तो । त्यसैले म शहर प्रति त्यति झुकाव पनि वढाउदिन ।
हुन त म जस्ता धेरै मानिस होलान । जसले काठमाण्डौलाई नचाहेर पनि स्वीकार्नु परेको होस । बाध्य र विवश भएर अर्थात निरिह भएर आफूलाई काठमाण्डौ बासी बनाएका वा चिनाएका होलान । खयर छाडौ यी कुरा । त्यो उनीहरुकै जिम्मा लगाऔ । नदुखेको टाउको किन दुखाउने । फेरि टाउको दुख्यो भने औषधी नै कहाँ पाहिन्छ र अस्पताल छन डक्टर छैनन । डक्टर छन औषधी छैनन । यस्तै छ मेरो देशको नियती । नयाँ नेपालको लागि यो कुनै नयाँ कथा होइन ।
भानुभक्तले उल्लेख गरेको कान्तिपुरी नगरी अर्थात हाम्रो राजधानी काठमाण्डौमा म केही महिना अघि छिरे । वर्षमासको महिना थियो । एक हप्ता जतिको योजना वनाएर त्यहा पुगे पनि गाडीको धङ्धङीले नै दुई दिन त त्यसै खाइदिइसकेको थियो । मसंग अव जम्मा पाँच दिनको मात्र समय वाँकी थियो । लामो समय लगाएर योजना बनाएर म त्यहाँ पुगेको थिएँ । धोको पुग्ने गरी काठमाण्डौ घुम्ने रहर पालेको थिएँ । लामो समय पछि डा. खगेन्द्रप्रसाद लुईटेललाई तेह्रथुम पुग्दा मन प्रफुल्ल भए जस्तो मलाई भने त्यस्तो केही भएन । त्यहाँ उनलाई प्रकृतिले स्वागत गरे झैं मलाई पनि त्यहा स्वागत गर्नेहरु थुप्रै थिए । धुलो, धुवाँ कोलाहल तथा दुर्गन्ध आदि आदि लाममा थिए । दुर्गन्धले काठमाण्डौको नाका पस्ने वितिकै स्वागत गरिरहेको थियो भने वसबाट ओर्लन नपाउदै फूलमाला लिएर कोलाहाल वसिरहेको थियो ।
काठमाण्डौ गएर गर्नुपर्ने मेरा कामहरुको गतिलै पोको थियो । म ती पोकोलाई फुकाउन प्रयासरत थिए वसपार्क नजिकैको एउटा गेष्टहाउसमा वसेर । योजना आयोगले वर्षौँ लगाएर तयार पारे झैँ मैले पनि चार्टबाट एउटा एउटा गर्दै ती योजनाहरुलाई बाहिर निकाले । महत्वलाई ध्यानमा राख्दै मैले अलग अलग गरेर पुरा गर्ने समय सिमा पनि तोके । समय सीमा रहयो पुरा पाँच दिन । पहिलो किनमेल । दोश्रो पशुपतीनाथ मन्दिरको दर्शन । तेश्रो साहित्यिक भेटघाट | चौथो केन्द्रीय पुस्तकालयमा पुस्तक दर्ता गर्ने आदि आदि ।
तोकिए वमोजिम ती योजनाहरु समय सिमामा पुरा हुने हुन कि होइनन । ती अज्ञात थिए । अर्थात भूमिगत जस्तै ।
पहिलो दोश्रो र दिनको निर्धारित कामलाई सिध्याएर तेश्रो दिनको योजनाको चार्ट लिएर म डेराबाट बाहिरिएँ । विचार थियो तेश्रोसंगै चौथो योजनालाई पनि समापन गर्ने । राजधानीमा रहेका केही साहित्यिक नातेदारहरुलाई भेटघाट गरेर आफूले संचालन गरेको अनलाइन अभियान गजल सम्बन्धी बहसको बारेमा जानकारी गराउने उद्धेश्यका साथ आफ्ना पोका पन्तुरालाई कोठामै राखेर म गंगवुस्थित भाडाको कोठाबाट बाहिर निस्किएको थिएँ । नयाँ वसपार्क पुगे एउटा ट्याक्सी समातेर । म भेटघाटलाई कताबाट अगाडि वढाउदा बेस होला भनेर सोचिराखेको थिएँ । त्यसैवेला मेरो मोवाइलको घण्टी वज्यो । सायद घनेन्द्रको होला भन्ठानेको थिएँ । तर होइन रहेछ । मैले अघिल्लै दिन देखि नै उनलाई भेट्न चाहिरहेको थिएँ । त्यसैले पनि सायद घनेन्द्रले नै गरेछन जस्तो लोगेको थियो । यदि घनेन्द्रले गरेको भए पहिला उनीसंग भेट गर्नु पर्यो अनि मात्र वाँकी यात्रा तय गर्ने सुरमा थिएँ । तर फोन त वेलवारी घर भई हाल बल्खुमा डेरा लिएर किर्तिपुरमा अध्ययन गरिरहेका भाइ सुन्दर भट्टको पो रहेछ ।
घनेन्द्र ज्यादै व्यस्त मान्छे रहेछन । दुई तीन पटक प्रयास गर्दा पनि म भेट्न सफल हुन सकिएन । हुन त हाम्रो यस भन्दा पहिला भेट भएको पनि थिएन । काठमाण्डौ छिरे पछि गजलमा जमेरै लागेका छन रे भन्ने सुनेको थिएँ । साच्चै रहेछ । केही साल अघि मैले पत्र पनि पठाएकै हुँ । पाए पाएनन त्यो म भन्न सक्दिन । पत्रका साथमा मैले मेरो गजल सङ्ग्रहपनि वुकपोष्ट गरेर पठाइदिएको थिएँ । अनाममण्डलीको नाममा । नेपाली हुलाक सेवाको के कुरा गर्नु । कुरा गर्यो कुरैको दुःख भने भैँ । वुबा विरामी हुनुहुन्छ औषधी गर्न आउनु होला भनेर गाउँबाट श्रीमतीले पठाएको पत्र बुबा मरिओरी तेह्रदिने पनि वित्छ । मासिका पछि छोरो औषधी लिएर टुप्लुक्कै पुगे झैँ । त्यसैले म हुलाकको त्यति विस्वास नै गर्दिन । पत्र पठाउनु परे इमेल जिन्दावाद । सायद त्यही कारणले मेरो पत्र नपाएको पनि हुन सक्छ । मैले त्यही निस्कर्ष निकाले । म गल्ती पनि हुन सक्छु ।
प्रसङ्ग वदलौ । सुन्दर भाइले 'दाइ म अहिले डेरामै छु आउनुहोस न भेटघाट गरौ' भने पछि घनेन्द्रसंगको भेटलाई अधुरै राखेर म बसपार्कबाट बल्खुसम्मको यात्राकालागि निस्किएँ । उनको डेरा कहाँ छ भन्ने कुरा मलाई थाहा थिएन । त्यसैले भाइ म आइहालें तपाई वाहिर सडकमा निस्कनु होस है भनें । नभन्दै उनी बल्खुमा मलाई पर्खिरहेका रहेछन । उनको डेरा पनि त्यति टाढा रहेनछ । नजिकै पाँच दश मिनेट जति समय लाग्यो । सुन्दरले नाम झैँ कोठा पनि सुन्दर ठाउँमा छानेका रहेछन । चारैतिर हरियाली धुलो र धुम्रपानबाट टाढै । सिर्जनशीलतालाई प्रश्रय दिने खाल्कै कोटेरो रहेछ । उनी पनि कोलाहललाई त्यति मन पराउदा रहेनछन । त्यस बिहान भाइकैमा खाना खाइयो । कुराकानी कै शिलसिलामा उनले भने- 'दाइ कृष्णहरि बरालको घर यहि बल्खुमै पर्छ भेटेर जानुभए वेश हुन्छ ।' मलाई उनको कुरा मुनासिव लाग्यो । आजको भेटघाटको उद्घाटन दाइबाटै गर्नु पर्यो भन्ठाने । उनी संग दाइको फोन नं. पनि रहेछ । मैले तुरुन्तै फोन सम्पर्क गरिहले । दाइ घरमै हुनुहुँदो रहेछ । उहाँले पनि अति सहजताका साथ भेटेरै गफ गरौन त भाइ भन्नु भयो । घर आइपुग्ने बाटो पनि भनिदिनु भयो । तर सु्न्दर भाइलाई बाटो थाहा रहेछ । पुग्नलाई कुनै समस्या परेन । छोटो समयमै दाइसंग धेरै कुराकानी हुन भ्याए । मैले दाइलाई आफ्नो अभियानका साथै मेरा केही गजल पनि सुनाउन भ्याएँ । हामी वीच कुराकानी हुँदा हुदै भुवन सुवेदी मेरा पुरानो साथी एकजना अर्का सहकर्मीका साथमा टुप्लुक्क आइपुग्नु भयो । उज्यालो नेटवर्कको फुँदो वोकेर । त्यस पछि त झन त्यहाँ एउटा साहित्यिक गोष्ठी झैँ भयो । दाइसंग मात्र नभएर उज्यालो नेटवर्कसंग समेत साक्षत्कार भयो । त्यो वातावरणमा मिसिन पुगे गजलकार तथा संगीतकार गैरे सुरेश । झन दाइकी छोरी द्धारा गाइएको गजलले भेटघाटलाई सांगीतिक वातावरणमा परिणत गरिदियो । उनका गजलका समेटिएका शब्द तथा बिम्ब सुन्दा पछिल्लो पुस्ताको गजल प्रतिको समर्पणको वारेमा प्रष्टै हुन्थ्यो । वहिनीको श्वर पनि उतिकै मिठो रहेछ ।
लामो समयको भलाकुसारी पछि हामी किर्तीपुर तिर उक्लियौ । मैले केन्द्रीय पुस्तकालयमा गएर त्यहाँ केही पुराना रेकर्ड हेर्नु थियो । नयाँ कृति पनि दर्ता गराउनु थियो । तर त्यहाँको दर्ता प्रणाली देखेर म त तीन छक्क परे । लथालिङ्ग भताभुङ्ग । अब्यवस्थित पनि उतिकै । ९- १० बर्ष अघि दर्ता गरेका मैले मेरै पुस्तकको पनि दर्तासुचीमा नाम पाउन सकिन । ठ्याक्कै नेपाली राजनीति जस्तो । नेपालको बर्तमान सरकार जस्तो । देशको यति ठूलो पुस्तकालयको त यस्तो हालत छ भने अरुको के हालत होला भन्ठानॆर मन अमीलो भएर आयो । पुराना कृति रेकर्ड नपाए पनि मैले मेरा पछिल्ला कृतिहरु दर्ता गराउन भने पछि परिन । त्यस पछि हामी त्यहाँबाट निस्कियौ ।
त्यसै दिन मैले रेडियो नेपालमा पनि पस्नु पर्ने थियो । गजल गंगाका प्रस्तोता एवम् गजल सर्जक नविन दहालसंग अपरान्हमा भेट्ने पक्का पक्की भएको थियो । त्यो सवै कुरा फोनबाटै भएको भएको थियो । मैले रेडियोमा जाने भए पछि ललिजन रावल, रमेश पौडेल र नवराज लम्साल तिनै जनासंग सम्पर्क गरेको थिएँ । आफू रेडियोमा आउदै गरेको खुसुक्कै भन्न भ्याएको थिएँ । रमेश पौडेलले आफू केही दिन देखि विदामा बसेको जनाइसकेका थिए भने नवराज लम्सालसंग सम्पर्क हुनै सकेको थिएन । ललिजन दाइसंग मात्र भेट हुने पक्का भएको थियो ।
समय अपराह्न तिरकै हुँदो हो । गर्मीको पारो पनि ह्वात्तै माथी पुगेको थियो । सागुरो बाटो अवस्थित घरहरुका कारणले काठमाण्डौको गर्मीलाई झनै बढवा दिइरहेको थियो । यस्तै गर्मी विचमा हामी कहिले गर्मी संग त कहिले गाडी संग लड्दै किर्तीपुरबाट एउटा माइक्रो बसमा चढेर सिहदरवारको यात्रा तय गर्यौ । त्यस विचमा भएको गाडीको कुरा भने नगरौ । दिक्क लाग्दो । सिट भन्दा तीन गुना वढी मान्छे कोचेर हिडाए पछि माइक्रो नभएर ट्रक भने पनि अनर्थ नलाग्ला । भैंसीलाई कोचेर हाले झैँ गरेपछि । तर के गर्ने । जसरी पनि जानै पर्ने । चेपिएर होस वा कोचिएर जसरी होस ।
रेडियो नेपाल पुग्नु भन्दा अगावै कृषि विकास संस्थान आउने हुनाले सुन्दर भाइले सर अनिल पौडेललाई भेट्ने हो कि भने । मलाई उनको कुरा मुनासिव लाग्यो । हामी सिंहदरवारको उत्तर ढोकालाई वायाँ पार्दै नजिकबाट पैदल हिड्न थाल्यौ । त्यहाँबाट अनिल दाइको कार्यालय नजिक पर्दो रहेछ । हामी पुग्न नपाउँदै अनिल दाइ त निस्किसक्नु भएको रहेछ । हुन त हामी गेटबाट पस्दै गर्दा पश्चिम गेटतर्फ जाँदै गरेको त मैले देखेको थिएँ । आइहाल्नुहुन्छ होला भन्ने ठानेको थिएँ । तर वहाँ त छुट्टि भएर घर पो गैसक्नु भएको रहेछ । फोन सम्पर्क गरेपछि पो थाहा भयो । त्यस पछि हामी रेडियो नेपाल तर्फै हानियौ ।
अहिले कार्यक्रम रेकर्ड गरौला । आगामी हप्ता प्रसारण गरौला भन्ने नवीनजीको सल्लाह बमोजिम म अल्ली ढिलै गरेर रेडियो तिर हानिएको थिएँ । रेडियो नेपालको दक्षिण ढोका त पुगियो तर नवीनजी भेटिनु भएन । उहाँको मोवाइलमा पनि सम्पर्क हुन सकेन । रिङ् जान्छ तर उठ्दैन । अव पर्यो फसाद । त्यतिका समयलगाएर काठमाडौको धुला धुँवा खादै आइयो भेट भएन भने त नमजा हुने भयो भन्ने सोच्दै थिएँ । नभन्दै त्यस्तै भयो । त्यसैवेला मलाई झल्यास्स लालिजन दाइको संझना आयो । फोन गरेर दाइ म त बाहिर छु । नवीनजीले रेडियोमा बोलाउनु भएको थियो । उहाँको फोन उठ्दैन भनेर जनाकारी गराएँ । एकछिन पर्खनुहोस है म आइहाले भन्दै उहाँ केही मिनेटमै वाहिर आउनु भयो । रेडियोमा छिर्नलाई पहिला नै पास लिनु पर्दो रहेछ । पास विना भित्र जान नपाइने रहेछ । पास भए पनि नविनसंग होला । उनी त एउटा विशेष बैठकमा छन । तपाईलाई जानकारी गराएनन भने पछि मात्र नवीनजीको फोन नउठेको रहस्य पत्ता लाग्यो । एक मनले त रिस पनि उठ्यो । नभ्याउने भए फोन गरेर भनिदिएको भए पनि त हुन्थ्यो नि भनेर । तर अपर्झट काम आइपर्यो होला भनेर चित्त बुझाएँ । रिसलाई मनभित्रै दवाएँ ।
त्यसपछि ललिजन दाइसंगै लामो कुराकानी भयो । एउटा पसलमा बसेर चिसो पिउदै हामीले गजलको बारेमा गफ छाँट्यौ । दाइले छोटो समयमै नेपाली गजलको बारेमा इतिवृतान्त बताउन भ्याउनु भयो ।
विचार र लयलाई एकै साथमा लैजानु पर्छ । विचारले मात्र गजललाई माथी उठाउन सकिदैन भन्ने उहाँको यो विचार त मैले पहिलै देखि नै सुन्दै पढ्दै आएको थिएँ । झन उहाँकै मुखबाटै सुन्न पाइयो । गजलमा विचारको मात्र वकालत गर्नेहरु प्रति उहाँको ठूलो आपत्ती रहेछ । त्यस्तो प्रवृत्ति प्रति खरैभएर उत्रनु भयो ।
अलिकति अगाडिको प्रसङ्गलाई जोड्न चाहन्छु । कॆही महिना अघिको विभोर वराल संगको भेटमा पनि मैले गजलको पछिल्लो अवस्थाको वारेमा जानकारी वटुलेको थिएँ । एउटा होटलमा वसेर गरेको कुराकानीमा विभोरले मलाई राजधानीको फष्ठाएको अलग अलग प्रबृतिको वारेमा वताएका थिए । उनले अरु पनि थुप्रै कुराहरु वताएका थिए । भेटमा मैले उनीबाट उनकै 'उड्दै गए सपनाहरु' र 'सप्रेम अर्चनाको सपना कहाँ छुन सक्छु' नामक दुई गजल सङ्ग्रह पनि कोसेली स्वरुप पाएको थिएँ । त्यस भेटमा भने मेरी अर्धाङ्गिनी सुजा शर्मा अर्थात चिन्तादेबी उप्रेती पनि साथमै थिइन । मम खाँदै हामीले गफ गरेका थियौं ।
फेरि प्रसङ्ग जोडौ । त्यस पछि हामी पूर्व निधारित कायक्रम अनुसार पुरानो बानेश्वर तर्फ हानियौ । त्यहाँ शर्मीला दिदी पर्खिरहनु भएको थियो । शर्मीला दिदी भन्नाले शर्मीला खड्का दाहाल । सुनसरी घर भै हाल काठमाण्डौलाई कर्मथलो वनाउदै आएकी शर्मीला खड्का दाहाल । उहाँ अघि देखि नै भाइ कहाँ हुनुहुन्छ कति खेर आइपुग्नु हुन्छ भनेर सोधिरहनु भएको थियो । दक्षिण ढोकाबाट पुनः हामी उत्तर ढोका तर्फ लाग्यौ । बाटोमा आउदै गर्दा कृष्ण धरावासी दाइको सम्झना आयो । फोन गर्दा म कार्यालयमै छु आउनुहोस न भेटेर गफ गरौला भनेकोले हामी पुनः कृषि विकास संस्थान भित्र छिर्यौ । दाइलाई उहाकै कार्यकक्षमै भेट्यौ । ख्याल ठट्टा र साहित्यिक गफ गाफ केहीवेर चल्यो । शर्मीला दिदीलाई पर्खाइराखेको र समयले पनि नेटो काटी सकेको हुनाले हामीले त्यहाँबाट जति सक्दो चाँडो निस्कनु थियो । दाइसंग फेरि भेट्ने वाचाका साथमा छुट्टियौ । केशुजी यहाँ आएपछि त केही कोसेली नलिई जान पाइदैन भनेर दाइले दराजबाट केही थान पत्रिका निकालेर दिनु भएको थियो । दाइको कोसेली च्यापेरै हामी बानेश्वर पुग्यौ । त्यहाँ पुग्दा शर्मीला दिदी अघि देखि नै पर्खिराख्नु भएको रहेछ ।
समयको सीमालाइ सम्झदै हामीले त्यहाँ केही बेर मात्र गफ गर्न सक्यौ । शर्मिला दिदी संग मेरो लामो समय देखिको चिनजान हो । दिदी पूर्वान्चलमा हुँदा विराटनगरका केही कार्यक्रममा भेट भएको थियो । अनलाईनमा प्राय दिनहुँ जसो भेट भैरहन्थ्यो । तर त्यसरी आमने सामने भएर गफ गरेको भने त्यो पहिलो समय थियो । दिदी मैले सोचे जस्तै फरासिलो स्वभावकी हुनुहुँदो रहेछ । उतिकै मायालु पनि । छोटो समयमा पनि दिदीले आफूले भोगेको थुप्रै अनुभवहरु बताउन भ्याउनु भयो । मोफसलमा त्यसमा पनि एउटी नारी भएर आफूले भोगेको पिडा मात्र नभएर अरुको प्रगति देखिनसहने आफ्नै सहकर्मी तथा सहपाठी प्रति उहाँको आक्रोश रहेछ । आक्रोशमै भए पनि ज्यादै घत लाग्दा कुरा पनि गर्नु भयो उहाँले । हुनत दिदीले त्यस्ता प्रवृति भएका ब्यक्तिहरुलाई नामै तोकेर भन्नु भएको भए पनि म दिदी भाइ वीच भएको गोपनीयतालाई भङ्ग गर्न चाहन्न । कसैको गोपनीय कुरा खोलीदिनु यो मेरो धर्म भन्दा बाहिरको कुरा हो । यही विचारमा म अडिग रहने मान्छे म । हिड्ने वेलामा दिदीले कोसेली स्वरुप उहाँको पछिल्लो कृति 'समयको क्यानभासमा' दिनु भयो । दिदीको लघुकथा सङ्ग्रह 'संवत अफिस' भने मसंगै थियो । दिदीसंगको विदाईले मन नमिठो भएको भए पनि कोसेली तथा धेरै महत्वपूर्ण अर्तिहरु पाएर मन फुरुङ्ग पार्दै हामी त्यहाँबाट छुट्यौ ।
त्यसवेला साँझ परिसकेको थियो । झण्डै आँखा देख्न पनि कठिन हुनेवाला भैसकेको हुँदो हो । सुन्दर भाइले वल्खु जानु थियो भने मैले गोगँवु वसपार्क । भाइलाई वल्खु जाने बसमा चढाएर म पनि आफ्नो गुँड तर्फ फर्किएँ ।
अघिल्लो दिन भएको विक्रम तिमल्सेना संगको भेटघाट झनै यादगार थियो । उनीसंग रेडियोमा गरेको गजल संवन्धी बहस विशेषको कार्यक्रम झनै महत्वपूर्ण रह्यो ।
त्यस्तै ज्ञानुवाकर पौडेकहाँ जादाको त एउटा कहिल्यै नभुल्ने क्षण वनेको छ मेरो लागि । भन्न पनि लाज लाग्ने । वसपार्कबाट गौसाला हिडेको मान्छे फर्किर झण्डै वसपार्क नै आइपुग्न लागेपछि मात्र थाहा भयो । गाडीमा निदाएको निदाई भएछ । फेरि फर्किर जानु परेको थियो दाइलाई भेट्न ।
छोटो समयमै मैले यस पटक काठमाण्डौबाट धेरै कुरा लिन सकें । हुन त यो काठमाण्डौको यात्राको वारेमा एउटा ठूलै कृति पनि जन्मिन सक्थ्यो । गजल सङ्ग्रह कविता वा तथा जे पनि हुन सक्छ । एउटा खण्ड काव्य वा महाकाव्य नै वनाउन सक्छन वनाउले त । कुन्ती जस्तो अर्को गजल काव्य नै पनि वनाउन सक्थे होलान यस्तो क्षण यदि शीव 'प्रणत'ले भेटेको भए अझ शर्मीला दिदीले त परिचयको क्यानभाषमा मिलनको क्यानभाषमा र विदाईको क्यानभासमा जस्ता कथा समेटिएको एउटा कथोपन्यास पनि तयार गर्न सक्नु हुन्थ्यो होला । तर मैले भने यस ती घटनालाई यही एउटा संस्मरणमा मात्र अटाउन सकें ।
समग्रमा भन्दा यसपटकको काठमाण्डौको यात्रा अवस्मिरणीय वन्यो । भलै त्यहाँ रहेका अन्य अग्रज तथा समकालीन स्रष्टाहरुसंग भेटेर गफ गर्ने आफ्नो अभियानको वारेमा वताउने रहर भने अपुरै रहे पनि । फोन सम्पर्क गरेरै भेट हुने भनिएका धुर्व मधिकर्मी, रामगोपाल आशुतोष, दीपक कथित, रमेश पौडेल, हेम भण्डारी, घनेन्द्र ओझा, एकादेशको गगनराज र गरिमा सम्मान थाप्न वेलवारीबाट काठमाण्डौ आएकी रेखा सुवेदी र इरान राई सेवक लगायतकासंग भेट नभए पनि । समग्रमा भन्दा फलदायी नै रह्यो यो यात्रा मेरो लागि । हर्ष र विस्मत दुवै हाता लागॆ भन्दा पनि वेठीक नहोला । यसरी म हर्ष र विस्मात दुवै बोकेर म काठमाण्डौबाट फर्किएँ ।